Allgedo.com » Ra’isul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha barlamaanka oo kulan deg deg ah ka yeeshay Madaafiic lagu garaacamay Madaxtooyada
Ra’isul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha barlamaanka oo kulan deg deg ah ka yeeshay Madaafiic lagu garaacamay Madaxtooyada
Print here| By: allgedo.com: Wednesday, December 5, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddoomiyaha Barlamanka,Ra’iisul Wasaraha iyo Madax kale oo ka tirsan guddiga amaanka qaranka isla markaasna ay ka wada hadleen arrimihii ugu dambeeyay ee magaalada.
Guddiga ayaa isla soo qaaday xaaladihi ugu dambeeyay ee amaan darro ee magaalada muqdisho xalay ka dhacay waxayna sheegeen in loo baahan yahay in wax laga qabto amaanka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka somalia.
Dhamaadka kulankaan ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Guddoomiyaha barlamanka Prof Jawaari oo haatan ah ku simaha Madaxweynaha Somalia wuxuuna sheegay inay kaga hadleen xaaladdii xalay iyo weerarii madaafiicda xalay lagu weeraray qeybo kamid ah magaalada Muqdisho.
Wuxuu intaas raaciyay Prof Jawaari inay Al Shabab yihiin kuwo dagaal kula jiro SHacabka Somaliyeed isla markasna ay dhibaateenayaan shacabka isla markaasna uu sheegay inay dowladda diyaar u tahay inay difaacdi shacabka somaliyeed.
Waxa kaloo War fidiyeenada la hadlay Ra’iisul Wasaaraha Somalia Dr Cabdi Faarax Shirdoon wuxuuna sheegay inay dowladda aysan ogolaan doonin in la dhibaateeyo shacabka iyadoo diyaar u ah inay ka hor tagto wax kasto oo lagu dhibaateenaayo shacabka.
Ugu dambeyn madaxda guddiga amaanka qaranka ayaa isku raacay inay bari taan sameen doonan oo ku aadan dhacdadii xalay lagu weeraray qeybo kamid ah degmada Boondheere ee gobolka Banadir oo ah goob masaafo gaaban u jirta xarunta Madaxtooyada Somalia.